Kedu ihe bụ akara asaa nke apocalypse ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Gịnị bụ akara asaa nke apocalypse. Akara asaa nke apocalypse bụ otu amụma banyere ihe ndị ga-eme n’oge ikpeazụ. Akara ọ bụla na-anọchi anya akụkụ nke ihe omume nke njedebe nke ụwa.
Akụkọ ahụ pụtara n’akwụkwọ nke apocalypse, bụ́ ebe a kọwara otú Jọn si hụ otu akwụkwọ (otu nnukwu akwụkwọ mpịakọta) n’aka Chineke. E ji akàrà asaa mechie akwụkwọ ahụ, nke ọ dịghị onye pụrụ ịgbaji. N'oge gara aga, a na-eji stampụ chebe akwụkwọ. Ọ dịghị onye nwere ike ịgụ akwụkwọ ahụ na-agbajighị akara. Ebe ọ bụ na ọ dịghị onye pụrụ ịgbaji akàrà, ọ dịghị onye pụrụ ịgụ akwụkwọ ahụ.
M'we hu n'aka-nri nke onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze ahu otù akwukwọ nke edeworo nime na azu, nke ewereworo nb͕a-aka-akàrà asa kachie;
M'we hu mọ-ozi di ike ka o nēti nkpu n'oké olu, si, Ònye kwesiri isighe akwukwọ ahu, na itọpu akàrà-ya?
Ọ dighi kwa onye ọ bula, ma-ọbu n'elu-igwe ma-ọbu n'elu uwa ma-ọbu n'okpuru uwa, puru imeghe akwukwọ, ma-ọbu ọbuná ile ya anya.
M bere ákwá nke ukwuu, n’ihi na ọ dịghị onye a hụrụ na o ruru eru imeghe akwụkwọ ahụ, ma ọ bụ ịgụ ya, ma ọ bụ ile ya anya.
Otu n’ime ndị okenye ahụ wee sị m: Akwala ákwá. Le, Ọdum nke ebo Juda, bú nkpọrọgwu Devid, emeriewo imeghe akwukwọ ahu na itọpu akàrà-ya asa. Mkpughe 5:1-5
Naanị Nwa Atụrụ Chineke (Jizọs) nwere ike ịgbaji akàrà na ịgụ akwụkwọ ahụ. Ka e meghere akara nke ọ bụla, ihe ndị dị mkpa mere n’ụwa na n’eluigwe:
1 Gịnị bụ akara asaa nke apocalypse: nkọwa
1.1 1st Akara nke Apọkalips
1.2 Akara nke asaa
1.3 3st Akara nke Apọkalips
1.4 4st Akara nke Apọkalips
1.5 Akara nke ise: Gịnị bụ akara asaa nke apocalypse
1.6 Akara 6 nke apocalypse
1.7 Akara nke asaa
Gịnị bụ akara asaa nke apocalypse: nkọwa
Nkọwa nke ihe bụ akara asaa nke apocalypse
1st Akara nke Apọkalips
Mgbe Nwa Atụrụ ahụ meghere akara nke mbụ, ihe dị n’ihu Chineke kwuru “bịa” na a onye na-agba ịnyịnya ọcha. O nwere ụta na okpueze wee pụọ iji merie.
Ahụrụ m mgbe Nwa-atụrụ ahụ meghere otu n’ime akàrà ahụ, ma anụrụ m otu n’ime ihe anọ ahụ dị ndụ ka o ji olu égbè eluigwe sị: Bịa hụ. M'we hu, ma, le, inyinya ọcha; ma onye nānọkwasi ya nwere uta; ewe nye ya okpu-eze, o we pua na-emeri, na imeri. Ediyarade 6: 1-2
Akara nke asaa
Onye ọzọ nọ n'ihu Chineke kwuru "bịa" na ịnyịnya na-acha uhie uhie pụtara. Ndị ọchịagha ya nwere mma agha wee bute ọgụ n'etiti ndị mmadụ.
Mgbe o meghere akàrà nke abụọ, anụrụ m ihe nke abụọ dị ndụ ka ọ na-asị: Bia, hụ. Ịnyịnya ọzọ pụtakwara, ọbara ọbara; ma onye ahụ nke nọ n’elu ya ka e nyere ike ịnara udo n’ụwa, na igburịta onwe ya; ewe nye ya oké mma-agha. Mkpughe 6: 3-4
3st Akara nke Apọkalips
Nke ato kwuru "bịa" na a ojii ojii. Onye agha na-ejide a akpịrịkpa na olu kwupụtara ọnụ ahịa nri dị elu n'oge ahụ.
Ma mb͕e o meghere akàrà nke-atọ, m'we nu ihe nke-atọ di ndu ka ọ nāsi: Bia, le; M'we hu, ma, le, inyinya oji; ma onye nānọkwasi ya nwere ihe-ọtùtù n'aka-ya. M'we nu olu sitere n'etiti ihe anọ ahu di ndu, si, pound abua nke ọka wheat otù denarius, na pound barley isi n'otù denarius; ma emerụla mmanụ ma ọ bụ mmanya. Mkpughe 6: 5-6
4st Akara nke Apọkalips
Nke anọ ana asị "bịa" na yaỌnwụ bịara n'ịnyịnya chanwụrụ anwụ, Hedis sochiri ya. Ha gburu otu ụzọ n’ụzọ anọ nke ndị bi n’ụwa n’ụzọ dị iche iche.
Mgbe o meghere akara nke anọ, a nụrụ m olu nke anọ dị ndụ, ka ọ na-asị: Bia, hụ. M'we hu, ma, le, inyinya edo edo, ma onye nānọkwasi ya ka anākpọ ọnwu, Hedis nēso kwa ya; + ewe nye ya ike ịchị otu ụzọ n’ụzọ anọ nke ụwa, ka o were mma agha + jiri ụnwụ + na igbu mmadụ + na anụ ọhịa + gbuo. Mkpughe 6: 7-8
Akara nke ise: Gịnị bụ akara asaa nke apocalypse
Mgbe e meghere akara nke ise, Juan hụrụ mkpụrụ obi nke ndị mmadụ gburu n’ihi ozi-ọma, ndị nọ n’okpuru ebe ịchụàjà. El altar era el lugar del templo donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Estas personas habían sacrificado sus vidas por Ịhụnanya Chineke.
Ndị nwụrụ n’ihi okwukwe ahụ jụrụ Chineke mgbe ọ ga-eme ihe ziri ezi. Onye ọ bụla natara uwe mwụda ọcha ma gwa ya ka ọ chere ntakịrị, n'ihi na a ka nwere ndị Kraịst ole na ole a ga-egbu n'ihi okwukwe ha.
Ha we tie nkpu n'oké olu, si, Rùe ole mb͕e, Onye-nwe-ayi, di nsọ na onye ezi-okwu, ka I nāgaghi-ekpe ikpe na ọbọ ọbara-ayi n'aru ndi bi n'elu uwa? Ewe nye ha uwe-nwuda ọcha, gwa ha ka ha zuru ike nwa oge, rue mb͕e ọnu-ọgugu ndi-orù-ibe-ha na umu-nne-ha, bú ndi anēb͕u kwa dika ha, gwuzuworo. Mkpughe 6: 10-11
Akara 6 nke apocalypse
Oké ala ọma jijiji mere ka ụwa maa jijiji mgbe e meghere akara nke isii. Anyanwu ọchịchịrị gbara, la luna O wee na-acha uhie uhie, kpakpando si na mbara igwe daa, ugwu na àgwàetiti ndị ahụ megharịakwa. N'etiti mgbagwoju anya a ndị nile nke ụwa zoro n’okpuru ala. Ha tiri mkpu ọnwụ, n'ihi na mbibi ahụ dị egwu.
Ma ndi-eze nke uwa, na ndi uku, na ndi-ọgaranya, na ndi-isi, na ndi-dike, na orù ọ bula na onye ọ bula nwere onwe-ya, zoro onwe-ha n'ọb͕à na n'etiti nkume di elu nke ugwu; ha we si ugwu na nkume di elu, dakwasi ayi, zopu kwa ayi n'iru Onye ahu Nke nānọkwasi n'oche-eze, na n'ọnuma nke Nwa-aturu ahu. Mkpughe 6: 15-16
N’agbata akàrà nke isii na nke asaa e nwere ọ́hụ̀ nke ndị mmadụ kwesịrị ntụkwasị obi nye Chineke ndị a karachitere maka nchebe ya. Akara nke Chineke n’egedege ihu ha gosiri na ha bụ nke Chineke, ha nwere nchekwa Ya.
Mgbe nwa atụrụ ahụ meghere akara nke asaa, ọ dị ọkara otu awa juu n'elu-igwe. Ndị mmụọ ozi asaa natara opi ọzọ mmụọ ozi debere a ihe-nsure-ọku nēsi ísì utọ na ekpere ndi-nsọ n'akuku ebe-ichu-àjà. Mmụọ ozi ahụ were ọkụ si n’elu ebe ịchụàjà were kpojuo ihe nsure ọkụ ahụ ma tụba ya n’ala. Enwere terremoto, égbè eluigwe, àmụmà na olu.
Mọ-ozi ọzọ we bia, guzo n'iru ebe-ichu-àjà, ya na ihe-igu-ọku ọla-edo; e nyere ọtụtụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ ka e wee tinye n’ekpere nke ndị nsọ nile, n’elu ebe ịchụàjà ọla-edo nke dị n’ihu ocheeze ahụ. Site n’aka mọ-ozi ahụ anwụrụ ọkụ nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ rigoro n’ihu Chineke site n’ekpere nke ndị nsọ. Mọ-ozi ahu we were ihe-igu-uku ahu, b͕ajue ya n'ọku nke ebe-ichu-àjà, tubà ya n'ala; ma éb͕è-elu-igwe di, na olu, na àmùmà, na ala-ọma-jijiji. Mkpughe 8: 3-5
Akara asaa ahụ gosiri ikpe ahụ nke Chineke n'elu uwa. Chineke ga-ata ụmụ mmadụ ahụhụ maka mmehie ha, ma ọ ga-akwụghachi ndị na-ekwesị ntụkwasị obi na nye Ya ihe omume nke akara asaa ahụ na-atụ egwu, ma enwere olileanya maka onye kwere ekwe.
Anyị na-atụ anya na isiokwu a ga-enyere gị aka ịmata ihe akara asaa nke apocalypse bụ. Ọ bụrụ ugbu a, ịchọrọ ịma Nke bụ nmehie isi asaa dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, anyị na-akwado ka ị gaa n'ihu na-eme nchọgharị Discover.online.
Gịnị bụ ndị ịnyịnya anọ nke apocalypse